झापाका दुर्गा प्रसाइले आफूले नै एमाले र माओबादी केन्द्रलाइ मिलाएको यसरी गरे दाबी (अन्तरवार्ता) – SawalNepal
झापाका दुर्गा प्रसाइले आफूले नै एमाले र माओबादी केन्द्रलाइ मिलाएको यसरी गरे दाबी (अन्तरवार्ता)
By सवालनेपाल	 प्रकाशित समय २०७४, १० फाल्गुन बिहीबार २१:२५
ए बाबा तपाईसँग कुन कसम खानुपर्छ मैले ? कुन मन्दिरमा बस्नुपर्छ ? यस्ता भ्रममा मान्छेलाई नहालम् । गोविन्द केसीले माफिया भन्नुहुन्थ्यो । उहाँ त युरोपियन युनियनको पैसामा चलेको दलाल हुन् ।रिर्पोटसनेपाल
किन बोलायो एमालेले स्थायी कमिटी बैठक? यस्तो छ कारण
भावनात्मक रुपमा एउटै पार्टी बन्नेगरी वाम एकताको प्रतिवेदन बनाइँदै
‘रानी’ लाइ ‘म्याडम’ भन्न सर्कुलर, सेनापतीको तस्विर पनि हटाइने